Wazee ဒီဂျစ်တယ်ဒီဂျစ်တယ်မီဒီယာဗဟိုသို့အဆင့်မြှင့်တင်မှုကိုကြေငြာခဲ့သည် | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Waze ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ Hub မှအဆင့်မြှင့်မှုများကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်
Denver - ဧပြီလ 25, 2017 - Waze ဒစ်ဂျစ်တယ်, Cloud-ဇာတိကဗီဒီယိုစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်လိုင်စင်န်ဆောင်မှုများ၏ဦးဆောင်မှုပေးသူ, ယနေ့ Waze ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ Hub, အချိန်လေးဖမ်းမိခြင်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပျေါလှငျဘို့ချက်ချင်းမရရှိနိုင်စေရန်အနီးရှိ-တိုက်ရိုက်ခွင့်ပြုတစ်ခုတည်းသောဗဟိုမှ, web-based စနစ်အဆင့်မြှင့်ထုတ်ပြန်ကြေညာ , ထုတ်ဝေ, နှင့်ဖြစ်ရပ်အဖြစ်စုစည်းဖြစ်ပျက်နေသည်။ ဖိုင်ကိုဒေါင်းလုဒ်အရှိန်အဟုန်မြှင့်ဖို့ Aspera တိုက်ရိုက်-to-S3 နှင့်အတူအကြောင်းအရာအဖွဲ့အစည်းနှင့်ရှာဖွေရေးနှင့်ပေါင်းစည်းမှုရိုးရှင်းအသစ်တစ်ခုပြခန်းအမြင်: အအဆင့်မြှင့်နှင့်အတူနှစ်ဦးကိုအဓိကတိုးမြှင့်လာကြ၏။
ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ Hub တစ်ခုတည်းပေါ်တယ်မှတဆင့်ဗဟိုတည်နေရာ၌ကျိန်းဝပ်အကြောင်းအရာခွင့်ပြုချက်-based access ကိုပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းအားကစားအခွင့်အရေးများကိုင်ဆောင်သူများနှင့်မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးအဖွဲ့အစည်းများများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ အကြောင်းအရာဖမ်းမိခြင်းနှင့် Waze ဒစ်ဂျစ်တယ် Core, ထိုလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ Hub ကုမ္ပဏီ၏ cloud-ဇာတိဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်သို့တိုက်ရိုက်မျိုချမိနောက်ကျောအဆုံးပေါ်နှင့်အလားတူအခြား Waze ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအထောက်အပံ့ပေးတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ စားသုံးမိမြို့အနီး-အစစ်အမှန်အချိန်အတွက်ဖြစ်ပျက်နှင့်အကြောင်းအရာ Core ဝင်သောတစ်ချိန်ကအသုံးပြုသူများချက်ချင်းဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ Hub အတွက်အတူလုပ်ကိုင်စတင်နိုင်ပါတယ်။
access ကိုပေးအပ်တဲ့အခါမှာအကြောင်းအရာပိုင်ရှင်များယခုသူတို့ content တွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာမှုနှင့်စည်းရုံးသည့်လမ်းများတွင်ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်ပိုပြီးတိကျတဲ့ရှိသည်ကြောင့်အဆိုပါအဆင့်မြှင့်တင်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ Hub ပို. ပင် Configure လုပ်လို့ရတဲ့ပါစေ။ ထိုနည်းတူအသုံးပြုသူများယခုရှာဖွေသူတို့လိုကို download လုပ်ပါရန်ပိုမိုလွယ်ကူ, ပိုမိုမြန်ဆန်လမ်းရှိသည်။
အထူးသသစ်ကိုပြခန်းအမြင်အကြောင်းအရာ metadata စွမ်းအားဖြင့်လုံးဝ Configure လုပ်လို့ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူတစ်ရိုးရှင်းပြီးအလိုလိုသိလမ်းအတွက်အကြောင်းအရာစုစည်းဖို့အခွင့်အရေးများကိုင်ဆောင်သူနိုင်ပါတယ်။ ငြ့်အရေးဆိုင်ရာကိုင်ဆောင်သူကိုလည်းအကြောင်းအရာကြားတွင် hierarchical ဆက်ဆံရေးပုံဖော်နှင့်သိရှိနိုင်ဖို့လူများအတွက်အမျိုးအစားနှင့်အမျိုးအစားခွဲများလွယ်ကူအောင်ပုံငယ်များပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ, ဂေါက်သီးပြိုင်ပွဲကနေ content တွေကိုတစ်ရက်ကအမြိုးအစားဖြစ်ပါတယ်, ပြီးတော့ထိုနေ့၌သည်ထင်ရှားကြောင်းကစားသမားများက subcategorized ။ Player ကိုကြွပ်အမြင်အာရုံဟာဒေတာဘေ့စထဲကနေဆွဲထုတ်ပုံရိပ်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးတိကျတဲ့ကစားသမားများအတွက်အကြောင်းအရာစုစည်းပြီးကိုကူညီပေးပါတယ်။ ကစားသမားနေ့လေးပျေါမှာထငျရှား အကယ်. ဥပမာ, စနစ်ကိုအလိုအလျောက်ပုံရိပ်တစ်ခုခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့, ထိုနေ့၌ကြောင်းကစားသမားများအတွက် tile ကိုဖော်ပြရန်ကြောင့်အသုံးပြုသည်။
အကြောင်းအရာဖွဲ့စည်းပြီးတာနဲ့သူတို့မထိုက်မတန်မြင်သည်အတိုင်း, အခွင့်အရေးကိုကိုင်ဆောင်သူထိုကဲ့သို့သောအချို့သောလူတွေကသို့မဟုတ်အုပ်စုများအကြောင်းအရာကသာအချို့သောအမျိုးအစားသို့မဟုတ်အမျိုးအစားခွဲများဝင်ရောက်ဖို့ခွင့်ပြုအဖြစ်အသုံးပြုသူအကောင့်များနှင့်ထောက်ပံ့ငွေခွင့်ပြုချက်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားစွမ်းရည်အခွင့်အရေးကိုကိုင်ဆောင်သူဖြန့်ဖြူး / မီးမောင်းထိုးပြနိုင်ရန်လိုသည်တိကျသောအကြောင်းအရာ drive ကိုအသုံးပြုသူများကကူညီပေးပါတယ်။
သူတို့ကဖိုင်တစ်ဖိုင် directory ကိုတဆင့်ရှာဖွေနေသာရှိပြီးပြည်ပမှပိုမိုအလိုလိုသိပြခန်းအမြင်တွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေနိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခြားအဆုံးတွင်, ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ Hub ရယူသူတွေကိုသူတို့ကပိုမိုလွယ်ကူစွာရှာနေတာရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ, အစောပိုင်းကဂေါက်သီးပြိုင်ပွဲဥပမာအပေါ်အခြေခံပြီး, လူတွေအနေနဲ့ပုံရိပ်ကို tile ကိုနှင့် Access အပေါ်ပေးထားသောနေ့၌ပေးထားသောကစားသမားနှင့်ဆက်စပ်အားလုံးရရှိနိုင်အသံ, ဗီဒီယို, ပုံများ, နှင့်မှတ်တမ်းကို click နိုင်ပါတယ်။ ထို့နောက်သူတို့ကဖိုင်တွေကိုလွှဲပြောင်းရန်အဆင်သင့်အနေဖြင့်အခါ, သူတို့တဦးတည်း-click ရ downloads, ပု Aspera ပေါင်းစည်းမှုကိုကျေးဇူးတင်အရှိန်။ Aspera တိုက်ရိုက်-to-S3 ပိုင်ဆိုင်မှုပြန်လည်သို့မဟုတ် staging အချိန်ကိုဖြုန်းခြင်းမရှိဘဲဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ Hub ကနေတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအစားအဖြစ်မကြာမီအသုံးပြုသူနှိပ်လိုက်ရင်အဖြစ် "ကို download" ဟုအဆိုပါအပြောင်းအရွှေ့ကစတင်ခဲ့သည်။
FTP ကိုက်ဘ်ဆိုက်များ, ဖိုင်-hosting ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ထိုကဲ့သို့သော hard drive တွေသို့မဟုတ်လက်မ drives တွေကိုအဖြစ် "sneakernet" ပြသနာကိုကျော်လွှားနိုင်စေရန်မတူဘဲ, ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ Hub transcoding, metadata ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပိုပြီးအဘို့အထုတ်လွှင့်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ခွင့်ပြုချက်စွမ်းရည်နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် Workflows ပေးသည်။ ဤအတောအတွင်းသက်ဆိုင်သူများထုတ်လွှင့်အရည်အသွေးအကြောင်းအရာချက်ချင်း access ကိုရ; မြှင့်တင်ရန်, ရှာဖွေ metadata ကို; နှင့်တဦးတည်းတည်နေရာမှ preview ကိုစွမ်းရည်အားလုံး။ ဒါ့အပြင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုအလယ်ပိုင်းဒေတာဘေ့စ (Core) ကိုကယ်နှုတ်တော်မူ၏, ပြီးတော့ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ Hub အတွက်တင်ပြထားပါသည် - access ကိုတွင်ကျယ်စွာအကြားထူးခြားတဲ့အရည်အသွေး - အခွင့်အရေးများကိုင်ဆောင်သူယခင်ကမျိုးစုံနေရာတည်ခင်းဧည်ခဲ့အကြောင်းအရာမျိုးစုံအမျိုးအစားများကိုစုရုံးနိုငျသညျ။ Create ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်အကြောင်းအရာတစ်ကြိမ်ဗဟိုတည်နေရာသို့, ပြီးတော့န့်အသတ်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုရန်မျိုးစုံ Workflows မှတဆင့်ဘယ်နေရာကနေမဆိုအချိန်မရွေးကြောင့်ရယူ: ဤနည်းအားဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ Hub Waze ဒစ်ဂျစ်တယ်ရဲ့ ", တခါလုပ်မဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်" ဒဿနကြုံးဝငျပတျသကျ။
"ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ Hub ကိုအသုံးပြုခြင်းခငြ့်အရေးကိုင်ဆောင်သူပြီးသား, အပြောင်းအလဲနဲ့လေးလည်းဖြန့်ဝေနှင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များထဲကနေဖမျးမီဒီယာသိုလှောင်ဘို့တစ်ခုတည်းတည်နေရာရှိခြင်းကနေအကျိုးအမြတ်။ နှင့်ပြီးသားဗဟိုပေါ်တယ်မှတဆင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာထံမှရှာဖွေဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ဖြစ်ခြင်းကနေအကျိုးအမြတ်အကြောင်းအရာလိုအပ်နေသည်အသုံးပြုသူများ, "ဘရိုင်ယန် Eldredge, Waze ဒစ်ဂျစ်တယ်များအတွက်ထုတ်ကုန်လိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် Live Event န်ဆောင်မှုများ၏ညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်။ "အခုကဒီအဆင့်မြှင့်ကျေးဇူးတင်ထိုသုံးစွဲသူအပေါင်းတို့သည်စည်းရုံးရေးရှာနဲ့ content ဒေါင်းလုပ်အတွက် ပို. ပင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, ရိုးရှင်းခြင်း, မြန်နှုန်းသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ ထိုရက်ပေါင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုအစဉ်အဆက်-တိုးမြှင့်ငွေပမာဏကိုဖြန့်ဝေနှင့်အတူအခွင့်အရေးများကိုင်ဆောင်သူသဘောတူညီမှုအဖြစ်, သူတို့ကဖြန့်ဝေမယ့်ဘယ်လိုအဘယ်သူကိုမှထိန်းချုပ်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ "
Waze ဒစ်ဂျစ်တယ်၏ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကအနည်းဆုံးရရှိနိုင် www.wazeedigital.com.
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/WazeeDigital/Wazee-Digital_DMH-Gallery.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ Hub ပြခန်းကြည့်ရန်
အဆိုပါ 2017 မှာ Waze ဒစ်ဂျစ်တယ်သွားရောက်ကြည့်ရှု NAB ပြရန် အဆိုပါ Wynn အလှပြင်ဆိုင် Suite, 3903 အတွက်
တွစ်တာပေါ်မှာ Share:twitter.com/intent/[အီးမေးလျ protected]_Digital%20Announces%20Upgrades%20to%20Digital%20Media%20Hub%20%23CloudNative%20%23NABShow%20-%20https://goo.gl/pu41dk%[အီးမေးလျ protected]
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ Aspera ပေါင်းစည်းရေး audio အသံလွှင်း ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ Hub ဖိုင်ကို download, ပြတိုက် NAB 2015 NAB 2016 NAB16 Waze ဒစ်ဂျစ်တယ် web-based system ကို 2017-04-26
ယခင်: #NABShow 2017: ထုတ်လုပ်သူ Spotlight ကို: Blackmagic ဒီဇိုင်းထံမှ NAB သတင်းများ!
နောက်တစ်ခု: အမေရိကန်ကိုယ်စားပြုမှုများအတွက်မီးပြတိုက်ရုပ်ရှင်လက္ခဏာတွေဒါရိုက်တာ Pepe Lansky နှင့်ယူလနျြ Rocher